HIRA SY MOZIKA (DHM)
...Ary Kristy Jesosy no fehizoro indrindra(Efesiana. 2:20)
FanoloranaTantaraFLMToby Fanantenana 67haAndraikitraPastoraKomitim-piangonanaKomitin'ny Planina 5 taonaKatekistaSampanaFifohazana (FIFIL)Fikambanam-behivavy (FBL)Fikambanan-dehilahy (FDL)Kristiana Tanora (KTLM)Sekoly Alahady (SSA)Skoto (FSFLM)Vokovokomanga (VLM)DepartemantaDiakonia(DDK)Fanabeazana Kristiana(DFK)Fanasoavana sy Fampandrosoana (DFF)Firaketana sy Serasera (DFS)Fitaizaim-panahy ho amin'ny fiombonana Masina (DFI)Fitandremam-pananana sy Fampitaovana (DFA)Fitoriana Filazantsara sy Asa Misiona (DFM)Hira sy Mozika (DHM)FaritraFaritra IFaritra IIIFaritra IVFaritra VFaritra VIFaritra VIIFaritra VIIIFaritra IXFaritra XFaritra XIFaritra XIIFaritra XIIIFaritra XIVFaritra XVIFaritra XVIISamihafaFOIBE FLMSynodam-Paritany Antananarivo (SPAnta)Fileovana Fahamarinana 67 HaToby Fanantenana 238-67HaAntokompihira Maintimolaly (MTL)Web-Mail
Ny Departemantan’ny hira sy Mozika izay hafohezina amin’ny hoe : "DHM" dia niorina tamin’ny alalan’ny fanapahan-kevitry ny Komitin’ny Fiangonana tamin’ny 12 Novambra 1993 ihany koa ; noho ny fahatsapana ny maha-zava-dehibe ny hira sy mozika eo amin’ny fiainam-panahin’ny Fiangonana. Manana Komity sy birao mpitarika azy ny DHM izay ivondronan’ireo mpitarika antoko mpihira sy izay rehetra mpitendry zava-maneno ao amin’ny Fiangonana. Misy eo amin’ny 20 eo ho eo ireo mpikambana ao amin’ny DHM. Ny andraikitry ny DHM dia ny fampandehanana ara-dalàna ny fanamafisam-peo ao am-piangonana sy fanamasahana ny hira mandritra ny fanompoam-pivavahana ary ny fandaminana ny fitendrena "orgue" sy ny anjara fotoana hiran’ny antoko mpihira tsirairay ao amin’ny Fiangonana. Andraikiny ihany koa ny mikojakoja sy mitahiry ny fitaovana rehetra momba ny fanamafisam- peo sy ny mozika (Orgue, micro, sns...). Manana soritr’asa koa ny DHM dia ny fampiofanana ny mpitendry zava-manenon’ny Fiangonana sy ireo mpikirakira ny fanamafisam-peo (ireo teknisiana). Mampianatra ny hira ao amin’ny litorjia ny Fiangonana koa izy ireo mba ho masaka tsara amin’ny olona ny litorjia. Marihina fa misy ireo antoko mpihira avy any amin’ny Faritra. Samy efa manana ny azy : ny Faritra faha-3, ny Faritra faha-5, ny Faritra faha-6, ny Faritra faha-7, ny Faritra faha-8 ary ny Faritra faha-13. Ato amin’ity Departemanta ity no andrindrana ny handraisan’izy ireo anjara fanompoana mandritra ny fanompoam-pivavahana.
BIRAO sy KOMITY
Mambra ny Birao
Ny Filoha : Atoa Ramanankoraisina Evariste Aimé Ny Filoha Lefitra:Atoa Rajaonarivo Samuel Ny Mpitahiry Vola: Rtoa Beninazy Harimalala Ny Mpitantsoratra 1: Atoa Randriatiana Miharisoa Ny Mpitantsoratra 2 : Atoa Maillot Jean Yves Edmond
Mambra ny Komity
1- Atoa Ramanankoraisina Evariste Aimé2- Atoa Maillot Jean Yves Edmond3- Atoa Rakotomamonjy Jean Claude4- Rtoa Randriantseheno Laingo5- Atoa Randimbijaona Georges6- Atoa Rajaonarivo Samuel7- Rtoa Beninazy Harimalala8- Rtoa Rakotoarimiza Lala9- Atoa Raharijaona Andry10- Atoa Randriatiana Miharisoa
1- Atoa Rafanomezantsoa Heriniaina2- Atoa Razafindrakoto Jean Philbert3- Atoa Ranjafizaka Vintana4- Atoa Randriampijaona Charly5- Atoa Randriatsarafara Lalao
Miandraikitra ny fiainam-piderana ataon’ny Fiangonana amin’ny fotoana rehetra, ho mendrika sy
hampivavaka : mozika sy fanamafisam-peo
Mampitombo ao amin’ny Fiangonana ny fitiavana zava-kanto kristiana, hampitombo ny finoany.
Miantoka ny fampianarana hira (ara-tSolfa) ny Fiangonana.
Miandraikitra ny anjara hira aton’ireo antokompihira amin’ny fotoam-pivavahana 3 isaky ny Alahady
Manana fiofanana indroa isan-taona ny DHM mba hanantanterahana ny fizotry ny asany ka ireto avy izany :
Mampiofana ny litorjika ny Pastora
Mampiofana ny litorjika ny Fiangonana
Mampiofana ny mpitendry zava-maneno
Mampiofana ny mikirakira ny fanamafisam-peo
Akon'ny Fanatenana Fandaharana atolotry ny FLM Toby Fanantenana 67 ha ho antsika isaky ny alakamisy amin'ny 06 sy sasany hariva ao amin'ny Radio Teny Fiainana ...
JOBILY FAHA 30 TAONAN’NY VLM 67HA Isaorana Andriamanitra fa tontosa ny alahady faha 09 novambre 2014 teo ny fanokafana ny Jobily faha 30 taonan’ny sampana VLM Vokovokomanga ...
Tenin'Andriamanitra isan'andro «Mazotoa manolotra ny tenanareo @Andriamanitra ho olona voazaha toetra dia mpiasa tsy mahazo henatra, mizara tsara ny teny fahamarinana. » (II Timoty 2:15)
Jer 29 .11
Fandaharam-potoana(Tsindrio ny andro tianao ho fantarina)	«
Jolay 2014 >
Tsy misy tranga
Jolay 07-07-14Jolay 14-07-14Jolay 21-07-14	RADIO : Akon'ny Fanantenana Toriteny alahady lasa teo
Mpitsidika Androany103Fitambarany109200IP ampiasainao :	Contact - Centre informatique FLM 67 ha -